Aqri cusboonaysiinta Qorsheynta Soo-gelitaanka ee ugu dambeysay.
Waxaa la turjumay Juun 25 warqad warqad qoys
Farriinta codka ah Juun 25 warqad warqad af soomaali
Taageerada Cuntada Ardayga: TAAGEERADA Cuntada Ardayga
Goobaha Cuntada Ardayda: Iskuulada la taxay waa meelaha qadada iyo jihooyinka si ay u awoodaan dugsi kasta.
Casharadan ayaa ku soo socota oo aad ka caawin karto xirfadahaaga xirfadeed ee ka duwan sida luqada ingiriisiga, xisaabta, sayniska, farsamada iyo jimicsiga oo ay ku jeedinayaan ardayda dhigta. Casharada toddobaadkani waxay ka wada hadlayaan barnaamij wacyigalin ah oo lagu sii daayo telefishanka dusgiyada dadwaynaha Seattle, baraha bulshada iyo internetka shebekada. Casharadan dheeraadka ahi waxay sii xoojinaysaa tacliinta sare ee lagu soo gudbinayo waxbarashadii fasalka. Qasab,, buundana laguma helayo, ardaydu waa in ay bartilmaameed ka dhigtaan wax kasta oo xoog ah oo ay ku shaqeeyaan. Fadlan ogow barnaamijyadaani inay u baahan yihiin barnaamijyo tayo leh oo ay ku xidhan yihiin sidii loo heli lahaa daryeel caafimaad.
Jadwalka PreK: Caawintaada dugsiga hoose / dhexe ee horumarka ayaa lagu soo geba geba gebayaa
Jadwalka-K-8 Jadwalka: Taageeridda Kursiga Caruurta ee Golaha Dhexe iyo Xilliga Dhexe ee Waqtiga Xiritaanka Xiritaanka Boqortooyada
Barashada Teknolojiga ah ee bilaashka ah: oo ay ku jiraan waxqabadyo ku saabsan shaqada teknolojiyad ah 4 Toddobaadyo - No Tech
SPS TV: Jadwalka warbaahinta ayaa lagu soo saaray boga TV SPS
Macluumaadka loo yaqaan 'Chromebook Kani' waa macluumaad loogu talagalay in lagu diyaariyo kulanka xog-ogaalnimada ah ee loo yaqaan 'Amazonbook laptop' ee loogu talagalay in loo diro si ay u taageeraan maamulkaaga xafiisyada Dadweynaha Seattle.
Schoology waa caqli si ay u adeegsato awood u lahaanshaha si ay u ilaaliyaan la kulanka, masuuliyiinta, iyo sawiro ardayda ku saabsan koorsooyinka maalin-ka-maalin, sida taariikhaha iyo shaqooyinka dugsiga.
Student User Name: 2019-20 Dhamaan Bedelaada magaca isticmaalka ee ardada iyo kan sirta ah macluumaadka ardayda fasalada 5th iyo 6th
Naviance: Naviance waxay u furmidoontaa dhamaan ardayda Dugsiyada Dadwaynaha Seatte ee fasalada 8-12 laga bilaabo dayrta 2018!
Liiska Ardayga ee SPS Student Email Checklist
Emailka Ardayda SPS Changing the Email Mailbox Layout and Settings
Emailka Ardayda SPS: Jadwalka Outlook Calendar for Students
Sameeyso Ablikashinka Gacanta ee Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka
Liiska Hubinta Koowaad ee Liiska Hubinta Kooxaha Ardayda
Dejinta Kooxda Tilmaamaha Taleefannada ee Mobilada Kooxaha Mobile App
Ku biir Kulamada kooxda iyadoo la adeegsanayo Aaladda Mobilada Ku biiritaanka Kooxaha Kulamada Qalabka Mobilada (taleefannada smart)
Ku biir Kulmada Koozda ee Kumbutu kumbuyuutarrada ardayda SPS Ku biiritaanka Kooxaha Kulamada Kombiyuutarka SPS
Ku biir Kulmada sababta adoo adeegsanaya Kombiyuuter shaqsi ahaaneed Ku biirista Kulamada Koowaad ee kullanka kumbuyuutarkaaga shaqsiyeed